China DuoDuo Folding bag trolley DX3015 Lightweight Aluminom Collapsible na Portable Fold Up Dolly onye na-emepụta na soplaya | Duoduo
DuoDuo ịkpakọba akpa Trolley DX3015 Fechaa Aluminium Collapsible na Portable Fold Up Dolly
Nkebi nke: DX3015
Mepee Nkewa: 27.5x31x95CM
Nhapu Nke Iri: 39.5x27x8.5CM
Efere Mbadamba: 27x22CM
Ike: 20 KGS
Ngwugwu: 10pcs kwa katọn
Size Carton: 55x42x29CM
Obere akpa a na-ebu obere foldable, ọ dị nfe ma nwee ike ị nwee ike ịpịachi, enwere ike itinye ya n'ime akpa gị.
Ọkaibe mputa imezi featuring ọcha edoghi na zoro ezo nzukọ.
Akpa nkwado nkwado arịlịka arịlịka ma na-egbochi ịgbanwee.
Oversized jupụtara na nkume wiil maka mma njikwa.
Nkwado eriri erukwa ka fọrọ nke nta okpukpu abụọ ya ogologo jide nza nke dị iche iche size ibu.
Foldable maka mfe njem na nchekwa. Foldable maka obere nchekwa nchekwa.
Mee ka ọrụ gị na-agagharị dị mfe: Igwe ndị a na-atụgharị anya dị ogologo na-adị jụụ ma dịkwa jụụ nke na-eme ka njikwa na ịmegharị ụgbọ ala dị mfe.
Eriri Na-agbanwe: Thelọ Bungee Blonge dị ogologo na-agbatị ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ iji jide ọtụtụ ibu dị iche iche. Idozi ihe nkwado akwadoro arịlịka ma gbochie ịgbanwee. A na-eme ntọala ahụ nke ihe siri ike ma na-adịgide adịgide iji buru ibu, ngwugwu, igbe.
Ka na-afụ ụfụ na ibu ahụ dị oke arọ? Ka na-enwe nsogbu site na nnukwu ibu na njem azụmahịa? N'agbanyeghị nsogbu nke ụlọ ahịa na-ewe gị iwe? Ikwesiri obere ụgbọ ala a na-ebugharị ebugharị, dị mfe ma tinye ya na akpa gị.
Dabere n’ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ elu ndị ị na-efe, enwere ike ịchọ ka ịlere igbe akpa gị na akpa gị. Ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ ịlele akpa ọ bụla, ị ga-achọ ikwenye na ụgbọ elu gị ma a ga-ahapụ ụgbọ ahụ ka ọ bụrụ ihe carryon. Iji mee ka ime njem ntakịrị ntakịrị, ị nwere ike ịtụle ịnweta ụgbọ ibu akpa apịaji. Ihe ndị a na-eme ka lọjistik nke njem dị mfe. Kọmpat mpịachi akpa Cart siri ike, ìhè-ibu ibu na-ewu, emepe na-emechi na sekọnd-enye mfe maneuverability. Oversized jupụtara na nkume wiil maka mma njikwa Kemeghi support support eriri arịlịka akpa na-egbochi ịgbanwee Safely transports ibu, igbe, ngwugwu.
Nke gara aga: DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3013 na Wheels Portable Nrụgide oru Aluminom Collapsible akpa Cart
Osote: DuoDuo Nrụrụ Ọrụ Nnukwu Aka Aka LH5001 Dual Handle Hand Truck
DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3009
DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3005 na Add ...
DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3002 ịkpakọba D ...